စက်တင်ဘာထာဝရ၏ ဘာသာရေးဆွေးနွေးချက်များ: 2010
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော်အစစ်
မြင့်မြတ်သူတို့ ၏စံအိမ် *
Feb 3, ချစ်သောမျက်စိဖြင့် ရှုကြရစေ
ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ သူဋ္ဌေးဖြစ်ဖို့ ဘ၀
အခြေအနေနဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့ မျှော်
ခု၊ သြဂုတ်လက စတင်ခဲ့တာပါ။
ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အသောက်အစား အပျော်အပါးလဲ ၀ါသနာပါသူမဟုတ်တော့လို့သွားချင်တဲ့ စိတ်တွေမဖြစ်ခဲ့
တာလည်းကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ တော့ ဘာကြောင့်လို့ရယ်မသိသွားချင်တဲ့စိတ်တွေ ပြင်းပြင်းပြပြ ဖြစ်နေတယ်လေ။
မတော်ပါဘူးဆိုပြီး တီဗွီကြည့်လိုက် ပုတီးစိတ်လိုက်နဲ့ဖြေဖျောက်ဖို့ကြိုးစား ခဲ့တယ်။မရဘူး၊ မသွားရ မနေနိုင်
လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ ကဲ ဒီလောက်တောင်ရှိရင်သွားမယ်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှမခေါ် ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းပဲ
လုပ်ပြီး ည ၁၀-နာရီကျော်မှ ၂-နာရီအထိ နိုက်ကလပ်အဖြစ် ဖန်တီးပြင်ဆင်လိုက်တာပါ။
အလှအပအဖြစ်ထားတယ်လို့ပဲ သူနားလည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ သူမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။
ခုတော့ ဘုရားခမျာ ဗယုတ်သုတ်ခနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွ မြူးတူးပျော်ပါးနေတဲ့ ကာမမှောင်တောထဲမှာ သီတင်းသုံး
ကြီးဝန်းကျင်မှာ ဖိုမအစုံစုံ ယစ်မူးအဟုန်ဖြင့် အစွမ်း
ကုန် မြူးတွန့်နေကြတယ်။ ဘုရားရဲ့ရှေ့တည့်တည့်
သူတို့ ကိုိယ်အလှ သူ့တိုအကတွေနဲ့ကာမမှောင်ကို
မြင်သာအောင်ထိုးပြနေပြန်တယ်လေ။ဘုရားက ရောင်ခြည်တော်ဖြင့်ထိုးပြနေသလို စီမံထားလေသလားတော့မသိ။
ဖြစ်တဲ့ တဏှာ၊ရတီ၊ရာဂါ တို့ညီမသုံးယောက်က ငါဘုရားကို လာဖြားယောင်းဖူးတာ တစ်ခါပဲရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီအဖြူမ
လေးတွေက ညတိုင်းလာဖြားယောင်းနေပါလား ”လို့ တွေးထင်တော်မူလေမလားမသိ။ ရန်မျိုးအောင်တော့
စတိုင်ကျကျနဲ့ အရက်ခွက်ကိုကိုင်လို့၊ တစ်ချို့က ဘုရားခြေတော် လက်တော်တွေပေါ်မှာ အရက်ခွက်တွေတင်
ထားပြန်တယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာကမိန်းကလေးက ဘုရားကိုကျောမီနေပြီး သူ့တွဲဖက်ကောင်လေးက ဘုရားပေါ်
လက်ထောက်ကာ ပူးကပ်ပွတ်သပ်လို့ ရစ်မူးနေပြန်တယ်။
ပေမဲ့ တောင်ကြီးကိုတဲ့ဖြိုမယ့်ကြံ ခါးကမသန်”ဆိုသလို သာမန်အလုပ်သ္မားလေး ရန်မျိုးအောင်ဘာတတ်နိုင်ပါမည်နည်း။
တော်ကြီးခမျာ ဆင်းရဲရှာမှာပဲနော်လို့ သူ့အတွေး သူ့အမြင်
နဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို သိပ်သနားနေမိတယ်။ ဘုရားဆိုတာ
သနားစရာမဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ရင်ထဲမှာ တော့ တကယ်သနား
နေမိတယ်။ ဘုရားနဲ့ ဒီဝန်းကျင်က လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လေ။ ဘုရားရုပ်ပွားတော်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကိုစိုက်ကြည့်မိ
ရာက သူ့ရင်ထဲမှာ “ဒါယကာလေး ရန်မျိုိးအောင်၊ ငါဘုရားကို တစ်ခြားနေရာကို ပင့်နိုင်ရင် ပင့်စမ်းပါကွာ” လို့
ပြင်းပြလွန်းလို့ အရောက်လာခဲ့ရတာ။ ဘုရားစောင့်နတ်တွေကများ ဒီမြင်ကွင်းကို ခေါ်ပြလေသလား မသိ။ မည်သို့ပင်
ဖြစ်စေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သူသိလိုက်ရပြီ။ အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တာဝန်
ရှိသူဟာ တာဝန်ကိုသိရမယ်။ သိသည့်အတိုင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရမယ်။ ရန်မျိုး အောင်ဟာ လူငယ်ပေမဲ့ စိတ်ထားသေး
ငယ်သူတော့မဟုတ်။ တာဝန်ရှိလာရင် ဆောင်ရွက်ရန်အဆင်သင့်၊ သာသနာအတွက်ဆိုရင် ပိုလို့ပင် ကြိုးစားချင်သူ။
ဒီကာမမှောင်အတွင်းက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ကြီးကို ပင့်ထုတ် ရမယ့်တာဝန်ဟာငါ့တာဝန်လို့ ဦးထိပ်မှာတင်ကာခံယူ
လိုက်တော့တယ်။ “ဘုရားရုပ်ပွား တော်ကြီးကို ငါရအောင်ပင့်မယ်”လို့ သံဒိဋ္ဌာန်ချ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူရဲ့
အဓိပတိစွမ်းအားရှိတဲ့ ဆန္ဒအလင်းရောင်ဟာ ဒီဝန်းကျင် ကာမမှောင် ကိုကျော်လွန်ကာ တောက်ပခဲ့ပေပြီ။
ရန်မျိုးအောင်ဟာ နောက်နေ့မှာစောစောအလုပ်ဆင်းဖြစ်တယ်။ ဆူရှီဘားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဆိုင်ရှင်
သူဋ္ဌေးအလာကို စောင့်နေတယ်။သူဋ္ဌေးရောက်လာပြီးခဏမှာ ဘုရားအတွက်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ ရန်မျိုးအောင်ဟာ
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သူဋ္ဌေးရုံးခန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ရာ မခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ အလုပ်သ္မားကို သူဋ္ဌေးက ခပ်စိမ်းစိမ်းမော့ကြည့်
တယ်။ “သူဋ္ဌေးကို ပြောစရာရှိလို့ပါ”။ “အေး-ပြော”။ “ဒီဆိုင်ထဲက ဗုဒ္ဓပုံတော်ကြီးကို ကျွန်တော့်ကို ရောင်းပါ၊
ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ခမယူပဲ တနှစ်လုပ်ပေးပါ့မယ်”။ ရန်မျိုးအောင်ဟာ သူ့ကြံ
စည်ထားတဲ့အတိုင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းပြောချလိုက်တယ်။ သူဋ္ဌေးက ဒီကောင် မတန်မရာ ဘာတွေလာပြောနေ
တာလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ လှောင်ပြုံးပြုံးလိုက်ပြီး ဦးခေါင်းကို ငြင်သာစွာရမ်းပြလိုက်တော့ ရန်မျိုးအောင်ခေါင်းငိုက်
ဆိုက်ဖြင့် အခန်းထဲကထွက်ခဲ့ရရှာတော့တယ်။ ပြောဆိုမာန်မဲ မလွှတ်လိုက်သည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်ရမလို။
ဖြစ်တယ်။ ဘာမှတော့ အကြောင်းမထူးခဲ့။တနေ့တော့
မန်နေဂျာကိုပြောမိတယ် “ ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပုံတော်က ငါတို့
နင်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကို အခုလိုမရိုမသေ မဖွယ်
မရာတွေ ပြုလုပ်နေတာကို တွေ့ရင် နင်တို့ကြိုက်ပါ့
မလား။ ငါတို့ဗုဒ္ဓကို ဒီလိုပြုလုပ်နေတာကိုမြင်ရတော့ ငါသိပ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။” လို့ မအောင့်ပဲ ခံစားမိတဲ့
အတိုင်းပြောချလိုက်မိတယ်။ သူတို့အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ကြဘူးလေ။ ရန်မျိုးအောင် စကားကြောင့်
မန်နေဂျာ ငိုင်ပြီး တွေဝေသွားတယ်။ သူပြောတာ အမှန်တရားပဲလို့ ယူဆသွားပုံရတယ်။ အသိတရားရှိသူတိုင်း
မယ်လို့ မျှော်လင့်မိရင်း ကျေနပ်နေမိတယ်။
ရန်မျိုးအောင်မှာ သူဋ္ဌေးက မခန့်ပါပဲ အလုပ်တစ်ခုတိုးခဲ့ပြီ်၊ အလုပ်ကိုစောစောလာပြီး ညကမြူတူးပျော်ပါး
သောက်စားကြရင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တဲ့အရက်ခွက်တွေ၊ ပေကျန်နေတဲ့အရက်စက်တွေ၊
ဘုရားဝန်းကျင်မှာ စွန့်ပစ်သွားကြတဲ့အရက်ခွက်တွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းတယ်။ ပြီးရင် သရဏဂုံသုံးပါးနဲ
ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို အခေါက်ခေါက်အခါခါရွတ်ဆိုပြီး ပူဇော်ကန်တော့တယ်၊ ဘုရားကြီးကိုပင့်နိုင်ရပါလို
၏လို့ လည်းအကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းမိတယ်။ ဒါသည်ပင် သူ့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်၊ နေ့စဉ်ကုသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေပြီ…။
ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေ လတွေပြောင်းခဲ့ပေမဲ့ ရန်မျိုးအောင်မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ဘာမှအကောင် အထည်
ပေါ်မလာသေး။ “ဆန္ဒ၀တော ကိံနာမကိစ္စံ န သိဇ္ဈတိ” (ပြင်းထန်သောဆန္ဒရှိသူသည် ဘယ်ကိစ္စမဆို မပြီးသည်
မည်သည်မရှိ)ဆိုသည့်အတိုင်း ဘုရားပင့်လိုတဲ့ဆန္ဒက ပိုလို့ ပိုလို့ ပင် တိုးလာမိတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် သူဋ္ဌေးရုံးခန်း
“သူဋ္ဌေးကို ဒေါ်လာ ခြောက်ထောင်လဲပေးပါ့မယ်၊ ခြောက်လလဲ လုပ်အားခမယူပဲ အလုပ်လုပ်ပေးပါ့မယ်၊
ကျေးဇူးပြုပြီး ဗုဒ္ဓပုံတော်ကြီး ကျွန်တော့်ကို ရောင်းပေးပါ”၊ ရန်မျိုးအောင်က ဒီတခါတော့ ပုံစံတစ်မျိုးပြင်ပြီးတောင်း
ဆိုလိုက်တယ်။ သူဋ္ဌေးရဲ့မျက်နှာဟာ ပထမအခါလိုမဟုတ်တော့လို့ ရန်မျိုးအောင်အားတက်မိ တယ်။မန်နေဂျာက
လဲ ပြောထားလိမ့်မယ်လို့ သူထင်မြင်မိတယ်။ “မင်း ဒီလောက်တောင်လိုချင်နေရင် ဒီနေရာမှာ အစားထားဖို့
နဂါးကြီးတစ်ကောင်ရှာပေးပါ”။ ရန်မျိုးအောင် သိပ်ပျော်သွားတယ်၊ “ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် ရှာပေးပါ့မယ်”လို့
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကတိပေးလိုက်တယ်။ အလုပ်အားရက်တိုင်း ရန်မျိုးအောင် နဂါးရှာပုံတော်ဖွင့်လေပြီ။
အနှံ့ရောက်ခဲ့ပြီ။ အသိမိတ်ဆွေများကိုလည်း ဖုံးဆက်စုံစမ်းတယ်။ စာရေးသူထံ ကိုလည်းဖုံးဆက်ခဲ့တယ်
“ဆရာတော် နဂါးရုပ်ကြီးကြီး ဘယ်မှာရနိုင်မလဲဘုရား။” “တရုပ်ဆိုင်တွေမှာ ရှိမှာပေါ့ကွာ”လို့ လွယ်လွယ်ပဲ
ဖြေလိုက်တယ်။ အကျိုးအကြောင်းလည်း မမေးလိုက်မိပါ။
နဂါးရှာရင်း ငွေခြောက်ထောင်အတွက်လည်းရှာရသေး၊ တကယ်တော့သူ့မှာမရှိ၊ သိမ်းထားတာလေးတွေ
တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ သုံးထောင်သာရှိပြီး သုံးထောင်လိုသေးတယ်။ ဘုရားပင့်ဖို့ သယ်ယူ စရိတ်ကလည်း
တစ်ထောင်လောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ လေးထောင်ပင်လိုသေး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ခေါင်းကုတ်လို့ကြံသော်လည်းအကြံ
က မထွက်။ ချေးးဖို့ငှါးဖို့ဆိုတာလဲမလွယ်ကူလှ။ ရှိတဲ့ပစ္စည်းကြည့်ပြန်တော့လဲ ဆွဲကြိုးတစ်ကုံးနဲ့ မော်တော်ကားသာ
ရှိရဲ့ ။ ကားကလဲ အလုပ်သွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်ပြန်။ ကြံရာမရနိုင်ခဲ့၊ မိမိငှါးရမ်းနေတဲ့ ၁၀-ပေ ၁၅-ပေအခန်းလေး
ရန်မျိုးအောင် ဇွဲမလျှော့ ဆန္ဒမပျက်၊ ဘုရားအတွက် ဘ၀ကိုပင်
ပေးဆပ်ချင်ပေးဆပ်ရပါစေ၊ ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး
ဖြစ်ရာ ကားကိုရောင်းမယ်၊ အိမ်နဲ့ အလုပ်က လေးမိုင်ပဲဝေးတာ၊ လမ်း
လျှောက်သွားမယ်။ ဘုရားအတွက်ပဲ ဒီလောက်တော့ ဒုက္ခခံရမှာပေါ့။
ရန်မျိုးအောင် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ် သိပ်ကျေနပ်မိတယ်၊ ပီတိဖြစ်
မိတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ အိပ်သွန်ဖာမှောက် ဒါနမြောက်အောင် လှူဒါန်း
တဲ့ စေတနာဟာ အလွန်အကျိုးကြီးတယ်လို့ မြန်မာပြည်မှာကထဲက
ကြားခဲ့ဖူး နာခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးကိုသူမမျှော်၊ကာမမှောင်အတွင်း
က ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီး ပင့်ထုတ်နိုင်ဘို့သာ အဓိကမျှော်မှန်းချက်။
အလုပ်အားရက်မှာ နဂါးရှာထွက်ရင်း ကားအဟောင်းရောင်းဝယ်
တဲ့ ဆိုင်တွေကို သူ့ကားဈေးနှုန်းစုံစမ်းတယ်။ ရွှေဆိုင်မှာ သူ့အမေပေး
ထားတဲ့ အမြတ်တနိုး ဆွဲကြိုးကိုလဲ ဈေးစုံစမ်းလိုက်တယ်၊ နှစ်ခုပေါင်း
လိုက်တော့ လေးထောင်ကျော်လောက်ရမယ်လေ။ ဟုတ်ပြီ၊ ရန်မျိုးအောင်သိပ်ပျော်သွားပြီ၊ ဘာမှပူစရာမလိုတော့။
ဟန်ကျလိုက်ပုံက နဂါးကိုလဲ တွေ့လိုက်ပြန်သေး၊ ၇-ပေခန့်ရှိတဲ့နဂါးကြီး တောင်ပံကြီးနဲ့ လှမှလှ၊ သူဋ္ဌေးတော့ သိပ်
သဘောကျလိမ့်မည်။ ရန်မျိုးအောင်ပျော်မဆုံးတော့၊ သူငယ်ချင်းကို မိုးဝင်းကို ပုခုံးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီး“အောင်ပြီကွ”
နောက်ရက် အလုပ်ဆင်းတော့ ၀တ္တရားမပျက် ဘုရားကြီးကို သန့်ရှင်းပူဇော်ပြီး ဘုရားရဲ့လက်တော်ကို လက်နှစ်
ဖက်နဲ့ တင်းကျပ်စွာကိုင်ကာ “အရှင်ဘုရားကို ပင့်နိုင်တော့မည်ဘုရား”လို့ အားပါးတရလျှောက် ထားလိုက်မိတယ်။
သူဋ္ဌေးလာတော့ သူဋ္ဌေးရုံးခန်းထဲကို အောင်လံကိုင်သွားသူလို ရွှင်လန်းတက်ကြွစွာ ၀င်ခဲ့ပြန်တယ်။တတိယအကြိမ်
၀င်ခဲ့ခြင်းပေါ့။ “ ရန်- မင်းနဂါးတွေ့ပြီလား။” “ဟုတ်ကဲ့၊ တွေ့ခဲ့ပြီ၊နဂါးကြီးက သိပ်လှတာပဲဗျာ။” “မင်း နဂါးက ဘယ်နှစ်
ပေလောက်ရှိလဲ။” “၇-ပေရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။” “ငယ်တယ်ကွာ၊ ငါက ၁၀ ပေအထက်နဂါးပဲလိုချင်တယ်”။ရန်မျိုးအောင်
ရဲ့အောင်လံကို အချိုးခံလိုက်ရပြီ။ ခေါင်းငိုက်ဆိုက်ဖြင့်ထွက်ခဲ့ရပြန်ပြီ။ခဲလေသမျှ သဲရေကျပြီထင့်…။
ရန်မျိုးအောင်ဟာ ဆူရှီဘားမှာထိုင်ကာ ငိုင်နေမိတယ်၊ဘာလုပ်ရမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ဆိုင်ပေါင်းစုံရောက်
ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ ၁၀-ပေလောက်ကြီးတဲ့နဂါး မရှိဘူးဆိုတာလဲ သူသိထားပြီးဖြစ်သား။ ဇာတ်လမ်းကတော့ပြီးလေပြီ.. ။
ဒါပေမဲ့ ရန်မျိုးအောင် အရှုံးမပေးချင် ဆက်လက်ကြိုးစားချင်တယ်။လမ်းစလဲမမြင်။ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် ရှာကြံ
စဉ်းစားဆင်ချင်မိပြန်တယ်။ ခေါင်းထဲမှာ ဉာဏ်အလင်းရောင်ပေါ်လာတယ် “ဟုတ်ပြီ - ဘုရားမှ တစ်ပါး အားကိုးရာ
မရှိဘူး၊ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကို ရွတ်ပွားပြီး သစ္စာဆိုမယ်”လို့မျက်စိလယ် လမ်းပျောက်နေသူ လမ်းမှန်တွေ့သလို
အရမ်းအားတက်သွားတယ်၊ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ရွတ်ဆိုရင်း ဆူရှီလိပ် လေတော့တယ်။
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 10:45 PM
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကြွင်းကျန်ဆဲ မြန်မာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ (ရုပ်သံ)
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 7:00 PM
စက်တင်ဘာထာဝရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာကြည့်တိုက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း..........(၁)
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း at 10:45 PM
မနေ့က အရှင်ဝဏ္ဏသီရိ ရေးထားသော ညီတော်အာနန္ဒာ၏ တသက်တာမှတ်တမ်း (ပထမတွဲ) ကို ဖတ်ရင်း ကျွန်တော်၏ စိတ်ထဲတွင် အလွန်ကြည်နူးစရာ ကောင်းပြီး အားကျစရာ ကောင်းလှသော မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက် သင်္ကန်းချုပ်ပွဲကြီး တစ်ခု၏ မြင်ကွင်းကို ဖတ်ရှု့မိပြီး ထိုခေတ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်နှင့် အကျင့်သီလ သမာဓိ ပြည့်စုံသော သံဃာတော်မျာtး၏ ညီညီညွတ်ညွတ် စည်းစည်းလုံးလုံး ဖြင့်နေထိုင် ကျင့်ကြံခဲ့ကြ သည်ကို တွေးမိပြီး ပိုမိုကြည်ညို ရပါတော့သည်။
တနေ့သ၌ အရှင်အနရုဒ္ဓါ သည် အလျား တစ်ဆယ့်သုံးတောင် ၊ အနံက လေးတောင် တိတိရှိသော ပံ့သကူသင်္ကန်းစများကို ရလာခဲ့သည်။ ထိုပံ့သကူသင်္ကန်း ချုပ်သောအခါမှာ အရှင်မဟာကဿဖ သည် သင်္ကန်း အရင်းပိုင်း မှာကိုင်၍ ပေး၏။ အလယ်ပိုင်း အတွက် တာဝန်ယူသူကား အရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာ အဖျားဘက်မှာတော့ ကျွန်ုပ် (ညီတော်အာနန္ဒာ) တာဝန်ဖြစ်၍ အရှင်မဟာမောဂ္ဂ္ဂလာန် သည် လိုအပ်သမျှသော အပ် နှင့် အပ်ချည်များကို သွားချည် ပြန်ချည် ယူ၍ ပေးနေ၏။ တခြားသော မထေရ်ကြီးများက အပ်ချည်များကို တစ်ပါးပြီး တစ်ပါး ကျစ်ပေးကြ၏။ ကျစ်ထားသော အပ်ချည် တစ်မျှင် တစ်မျှင် ဆုံးလေတိုင်း အပ်နဖား ထိုးပေးသူကား သုံးလူ့ထွဋ်ထား ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ် သာဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မပဒ အဠကထား အရယန္တဝဂ် ၊ အနုဂုဒ္ဓါ ဝတ္ထုတွင် မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။
ဟိုးလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကဖြစ် ပျက်ခဲ့သော မြင့်မြတ်သောသူများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုသည် ယနေ့ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဝမ်းမြောက်ကြည်နူး ဖြစ်ကြရသည်။ လောကသားတို့၏ အနှိုင်းမဲ့သော ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဖြစ်တော်မူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာ တော်သည် အကျင့်တူမှု နှင့် အမြင်တူမှုကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်တဲ့ စည်ပင် ခိုင်မာနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ စစ်မိစ္ဇာ အာဏာရှင်များကြီးစိုးသော မြန်မာပြည် ကြီးဝယ် မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညို လေးစား သူများ အပါအဝင် ဓမ္မတရားကို လိုလား နှစ်သက်သော ရဟန်း ၊ ရှင် လူအားလုံးတို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ လိုလားတော်မူသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အကျင့်ချင်းတူမှု နှင့် အမြင်းချင်းတူမှုကို အခြေပြုပြီး အဓမ္မတရား နှင့် စစ်မိစ္ဇာ စနစ်ဆိုးကြီး ပပျောက်သွားအောင် ညီညီညွတ်ညွတ် စုစုစည်းစည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
"ဓမ္မတရားများ အမြန်ဆုံး ထွန်းကားတည်တံ့ ပါစေ..."
"ရဟန်းတို့ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး
အစဉ်မပြတ်စည်းရုံးညီညွတ်စွာသံဃာ ကိစ္စကို ပြုလုပ်၍ နေ၏။
အသင်တို့သည် သံဃာတာဝန် ဟူသမျှကို ဆောင်ရွက်နေ၏။
သံဃာ၏ စည်းကမ်းဥပဒေ တခုခုကို မကျူးလွန်၊ မဖောက်ဖျက်၊
အသင်တို့သည် မိမိတို့၏ သီတင်းသုံးဖော်အားလုံး၏ ချမ်းသာရေးကို ကြောင့်ကြ၍နေကြ၏။
အသင်တို့သည် ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးတက်မှု ရှိသွားပေလိမ့်မည်။
၁၇ ဧပြီလ ၂၀၁၀
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 2:37 AM
"ဟင်းမွှေယောက်မသည် ဟင်း၏အရသာကို မသိနိုင်သကဲ့သို့
လူမိုက်သည်လည်း အသက်ရှည်သမျှ ပညာရှိကို ဆည်းကပ် နေထိုင်ရသော်လည်း (ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်၊ ပဋိဝေဒ ဟူသော) တရားကို မသိနိုင်ပေ။"
ဓမ္မပဒ (၆၄) ဥဒါရိတ္ထေရ ဝတ္ထု
ယခုမြင်ရသောပုံတော်မှာ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော်အစစ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုံကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူသည့်နေရာဖြစ်သော မဟာဗောဓိ ညောင်ပင်ရင်းတွင် နိုင်ငံခြားယောဂီ တယောက် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤပုံတော်မှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော်အစစ် ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ထူးခြားသော ပုံတော်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပုံတော်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ဓမ္မပရိသတ်ကြီးကို စာရေးသူ ရှင်းပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမတွင် ဤပုံတော်၏ရာဇဝင်ကို ရှင်းပြလိုပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက နိုင်ငံခြားမှ ဘာသာခြား အမျိုးသမီးတဦးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များကို လေ့လာဖတ်ရှုရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဆုံးအမများကို ယုံကြည်သက်ဝင်လာပါသည်။ ထိုမှတဆင့် လက်လှမ်းမီသမျှ ဗုဒ္ဓစာပေများကို အချိန်ရလျှင်ရချင်း လေ့လာဖတ်ရှု မှတ်သားမှုများ ပြုလုပ်ပါတော့သည်။
ထိုအခါ စာပေများကို ဖတ်ရာကို အားရတင်းတိမ်ခြင်း မရှိပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော သစ္စာလေးပါး တရားတော်များကို ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူရာဒေသဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာပြုရာ ဒေသများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ရင်း မြတ်စွာဘုရား၏ မူလပုံတော်အစစ်ကို ဖူးမြော်ချင်သည့် သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
သို့ရာတွင် လောကတွင် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် သူမ၏စိတ်အကြံသည် မဖြစ်နိုင်မှန်းလည်း သိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓစာပေထဲတွင် သစ္စာအဓိဌာန် ပြုပါက အလိုရှိရာ တောင့်တရာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိ၍ သစ္စာအဓိဌာန်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့သည်။ သို့ရာတွင် သာမန် သစ္စာအဓိဌာန် မဟုတ်ပါပဲ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသည့် မဟာဗောဓိညောင်ပင်ရင်းတွင် အနှစ် (၂ဝ) အားထုတ်ပြီး အဓိဌာန်ပြည့်ပြီးသည့် နေ့တွင် မဟာဗောဓိပင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ရိုက်သည့်ပုံတွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပုံတော်ထင်စေရန် သစ္စာပြုပါသည်။
သစ္စာပြုပြီး အဓိဌာန်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံခြားယောဂီသည် အနှစ် (၂ဝ)ပတ်လုံး ကြီးစွာသောလုံ့လဖြင့် တရားအားထုတ်ပါသည်။ တရားအားထုတ်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ကာ အားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အချိန်တရွေ့ရွေ့ကုန်ကာ အနှစ် (၂ဝ) တင်းတင်းပြည့်သည့်နေ့ ရောက်လာပါတော့သည်။ ထိုပြည့်သောနေ့တွင် သူ၏စိတ်တွင် မြတ်စွာဘုရားမှလွဲ၍ ဘာမှ စိတ်မရှိတော့ချေ။ စိတ်မှာလည်း အလွန်ဖြူစင်ပြီး ကြည်လင်နေပါသည်။
ဤသို့ကြည်လင်သော စိတ်ဓါတ်၊ ယုံကြည်သော သဒ္ဓါတရားတို့ဖြင့် အဓိဌာန်ပြုထားသည့် အတိုင်း မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပါသည်။ သူမ၏စိတ်တွင်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏ပုံတော် ပေါ်မည်ဆိုတာ ယုံကြည်မှု တထစ်ချရှိပါသည်။ ထင်ထားသည့်အတိုင်းပင် ကူးသည့်ဓါတ်ပုံတွင် မြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော် ပေါ်လာပါတော့သည်။ ထိုပုံမှာ ယခုပူဇော်ထားသည့်ပုံပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဤပုံတော်မှာ ပုံတော်အစစ် ဖြစ်ကြောင်းကို ထောက်ခံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်၍တင်ဆက်ထားပါသည်။
ဓမ္မစာအုပ်ကဏ္ဍတွင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် မောင်းထောင် မြေဇင်းဆရာတော်၏ ဓမ္မရသ စာအုပ်များကို ရှေးဦးစွာ ဖတ်ထားစေလိုပါသည်။ ဆရာတော်သည် ကန္နီရွှေသိမ် ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်ရင်းခြာ ဖြစ်ပါသည်။ ကန္နီရွှေသိမ် ဆရာတော်၏ ထေရုပတ္တိကို ကျော်နန္ဒအောင်၏ ဝိပဿနာ အားထုတ်နည်းများ စာအုပ်တွင်၎င်း၊ ဓမ္မစရိယ ဦးဌေးလှိုင်၏ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ စာအုပ်တွင်၎င်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မောင်းထောင် မြေဇင်း ဆရာတော်သည် ကန္နီရွှေသိမ် ဆရာတော်ကြီး၏ နည်းနိသယအတိုင်း သမထ ဝိပဿနာ တရားများ သင်ပြပေးခဲ့သည့်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (၃၁)ဘုံခွင်ကို သမာဓိ အလင်းနိမိတ်ဖြင့် နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်၊ နဂါးပြည်၊ ငရဲပြည် စသော နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်နိုင်ရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခဲ့သည်မှာ တရားလောက၌ အထူးပင် ထင်ရှားပါသည်။ မန္တလေးတိုင်း ရန်ကင်းအေးငြိမ်း ရိပ်သာတွင်လည်း ယောဂီများကို တရားပြသပေးခဲ့ပါသည်။ ယောဂီများမှာ ဆရာတော်၏ သမာဓိ ထူထောင်နည်းဖြင့် အလင်းနိမိတ်လွှတ်ကာ ထိုနေရာများသို့ အောင်မြင်စွာ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုယောဂီများ အထဲမှ ကမ္မဌာန်းပြဆရာ ဦးမြင့်နိုင်နှင့် ယောဂီဦးစောမြင့်တိုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ယောဂီများမှာလည်း မောင်းထောင် မြေဇင်းဆရာတော်၏ နည်းဖြင့် ဝိပဿနာကို အောင်မြင်စွာ အားထုတ်ဖူးပါသည်။
ကမ္မဌာန်းပြဆရာ ဦးမြင့်နိုင်က ဤပုံတော်မှာ မြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော်ဖြစ်ကြောင်းကို စာရေးသူအား ယခုကဲ့သို့ အားရပါးရ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မေး - ဆရာရေ၊ မောင်းထောင် မြေဇင်း ဝိပဿနာ အတွေ့အကြုံလေးကို ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ အဓိကကတော့ သမာဓိထူထောင်ပြီး သမာဓိ တည်ကြည်လာတော့ စိတ်ကိုညွှတ်ပြီး အလင်းနိမိတ် လွှတ်တဲ့သဘောပါ။ သမာဓိခိုင်တော့ ဝိပဿနာကူးပါတယ်။
မေး - တာဝတိံသာနတ်ပြည်က လူ့ပြည်နဲ့ တူပါသလား ဆရာ။
ဖြေ - မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ အကုန်လုံး အသက်ငယ်ငယ် အရွယ်တွေပါဘဲ။ အဝတ်အစားတွေကလည်း တောက်တောက် ပြောင်ပြောင်တွေ ဝတ်ကြပါတယ်။ အနီရောင် တောက်တောက်၊ အဝါရောင် တောက်တောက် တို့ ဝတ်ထားပါတယ်။ အကုန်လုံးကလည်း ပျော်နေကြပါတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင်တွေလည်း များပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေကတော့ ပုဂံခေတ်က အဝတ်အစားအတိုင်း ဝတ်ကြပါတယ်။ နတ်သားတွေ၊ နတ်သမီးတွေကတော့ တော်တော်များများ အဲဒီလို ဝတ်ကြပါတယ်။ ဘုံဗိမာန်ရှင် နတ်သား၊ နတ်သမီးတွေကတော့် ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ဝတ်ကြပါတယ်။ ဗိမာန်ရှင်တွေကတော့ နည်းပါတယ်။ အခြွေအရံ နတ်တွေက များကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အမြဲပျော်နေကြတယ် ခင်ဗျ။
မေး - သိကြားတို့၊ နတ်မင်းကြီး လေးပါးတို့ရော တွေ့ခဲ့သေးလား ဆရာ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ သိကြားမင်းကတော့ နတ်ဝတ်နတ်စားနဲ့ အထူးအနေဖြင့် အရှေ့က ထူးခြားတဲ့ သူမတူတဲ့ အဆောင်အယောင် ပါပါတယ်။ နတ်မင်းကြီးလေးပါးကတော့ တောက်တောက် အရောင်တွေ၊ အဆောင်အယောင်တွေ ဝတ်ပါတယ်။ နီ၊ ဝါ၊ စိမ်း ပြာ တရောင်စီပါ ဝတ်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
မေး - ဆရာ ပြီးတော့ ဘယ်ရောက်ခဲ့သေးလဲ။
ဖြေ - ကျနော်ကတော့ ဘုရားရှင် အဘိဓမ္မာ ဟောကြားတဲ့ သိကြားမင်း ပဏ္ဍု ကမ္ဗလာ ကျောက်ဖြာတို့၊ သုဓမ္မာ ဇရပ်တို့၊ နန္ဒဝန် ပန်းဥယျာဉ်၊ စူဠာမဏိ စေတီတော်တို့လည်း ရောက်ပါတယ်။ နတ်ပြည်က ကောင်းကင်ကြီးကတော့ ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်ပါဘဲ။ မြေပြင်ကတော့ ကတ္တီပါ ကော်ဇောစိမ်းကြီးလိုဘဲ။
မေး - ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုလည်း ရှင်းပြပါဦး။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ ပင်လယ်ကသစ်ပင် ခြေရင်း ပဏ္ဍု ကမ္ဗလာ ကျောက်ဖြာရှေ့ရောက်တော့ အဓိဌာန် ပြုကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်လို အဓိဌာန်ပြုသလဲ ဆိုတော့ ဤနေရာသည် ဘုရားရှင် အဘိဓမ္မာ တရားတော် ဝါတွင်း (၃)လပတ်လုံး ဟောကြားခဲ့သည့်နေရာ မှန်ပါလျှင် ဘုရားရှင်ကို သက်ရှိထင်ရှားအတိုင်း ဖူးတွေ့လိုပါ၏လို့ အဓိဌာန်ပြုပါတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ဖူးတွေ့ရပါတယ်။ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ပဏ္ဍု ကမ္ဗလာ ကျောက်ဖြာထက်မှာ ဘုရားရှင်က တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး တရားဟောနေပါတယ်။ အောက်မှာက သန္တုသီ နတ်သား၊ သက္က သိကြားမင်း၊ နတ်မင်းကြီး လေးပါး၊ ဗြဟ္မာမင်းတွေ ပြီးတော့ များပြားလှတဲ့ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေဗျာ။ အောင်ဆန်းကွင်းမှာ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်သလိုဘဲ။ အလယ်မှာ ဘုရားရှင်က တရားဟော၊ အလယ်ကနေ အထက်ထိ နတ်ဗြဟ္မာ ပရိတ်သတ်တွေ။ အလွန်ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။
မေး - ဆရာရေ၊ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုလည်း အသေးစိတ် ပြောပြပါဦး။
ဖြေ - အေးဗျ၊ အခုပုံတော်နဲ့တော့ တထေရာတည်းဘဲဗျာ။ လည်ပင်းတော်က ဆင်စွယ်လို ဖြူပြီး အဖုအထစ် မရှိဘူး ခင်ဗျ။ လုံးပြီးတော့ ချောနေတာဘဲ။ နားတော်ကလည်း ပခုံးထိ ရှည်တယ်။ မျက်နှာတော်ရဲ့အလယ်မှာ ဥဏ္ဏလုံ မွှေးရှင်တော်လည်း ရှိတယ်ခင်ဗျ။ လက်တော်ကလည်း သွယ်လျတယ်။ ရှည်တယ်။ ခြေဖဝါးတော်ကလည်း ညီညာတယ်။ နှာခေါင်းတော်ကလည်း စင်းတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ ရောင်ခြည်တော် ခြောက်သွယ်ပါဘဲ။ လိမ်လို့ မရဘူးခင်ဗျ။ ပုခုံးတော်ကနေ ထွက်တာဗျ။ နတ်ဗြဟ္မာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘယ်လိုမှကို နှိုင်းယှဉ်လို့ မရအောင် ထူးခြားပြီး သွင်ပြင်လက္ခဏာ ကြည်လင်ပါပေတယ်ဗျာ။ ကြည်ညိုစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ။
မေး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ပါ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကို ပြန့်အောင် ဖြန့်ပေးပါခင်ဗျာ။ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်။
ထိုအမေးအဖြေ လုပ်ခဲ့သော ဆရာဦးမြင့်နိုင်မှာ ယခုလက်ရှိ မန္တလေးမြို့ ၇၄လမ်းနှင့် ၃၅လမ်းကြားထောင့်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ယောဂီဦးစိုးမြင့်ကိုလည်း ဖုန်းနံပါတ် (၉၅-၂-၃၂၂၇၉)သို့ ဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဆရာဦးမြင့်နိုင်မှာ ယောဂီဦးစောမြင့်အား ဝိပဿနာရှုမှတ်နည်း သင်ကြားပြသပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်. ယခုလည်း ဝိပဿနာတရားတော်များကို သင်ကြားပြသပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကင်းအေးငြိမ်း ဓမ္မရိပ်သာသို့ ဖုန်းနံပါတ် (၉၅-၂-၅၇၂၅၃) သို့ဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 8:06 PM
မိဘတို့သည် သားသမီးအပေါ်တွင် မည်မျှကောင်းကြောင်းကို ထင်ရှားစေသော စာသားများဖြစ်သည်။ အချို့သော သားသမီးတို့သည် မိဘကို ပစ်ပယ်၍ ဘိုးဘွား ရိပ်သာ သို့ပို့ထားကြသည်။ အချို့ သော သားသမီးများက မိဘတို့ကို စော်ကားကြသည်၊ ထိုသို့သာ သားသမီးများက မိဘကိုစော်ကားနေလျှင် ငရဲရောက်မည်မှာ ဧကန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မဖြစ်ရလေအောင် လူတိုင်းသိရှိပြီး လိုက်နာနိုင်ရန်ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ အထက်ပါစာသားများ၏ အကျယ်ရှင်းလင်းချက်မှာ
၂။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဒီလိုစား၊ဒီလိုသွား၊ဒီလိုနေ ဟူ၍ သင်ကြားပြသပေးသောကြောင့်လက်ဦးဆရာ ဖြစ်သည်။
၃။ မိဘသည် ရပ်ဝေးတွင် စီးပွားရှာ၍ သားသမီးကိုကျွေးမွေးသည်။သားသမီးကလည်း ထိုသို့ ပြန်လည် လုပ်ကျွေး ထိုက်သော အာဟုနေယျ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
၁၁။ သားသမီးများကို ချော့ပြော၊နားဝင်အောင် ပြောသောကြောင့် တောသယန္တိ ဂုဏ်မည်သည်။
၁၂။ ကိုယ်သုံးဖို့ ရှာထားသောပစ္စည်းကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်မသုံးရက် ၊မစားရက်အောင် သားသမီး အတွက် ချန်ထားသောကြောင့် ရသော ဂုဏ်ကို ဂေါပယန္တိ ဟုခေါ်သည်။
စကားချပ်။ ။ ပါဠိစာပေကို များစွာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသောကြောင့် အချို့ သော ပါဠိစာသားများမှားယွင်းမှု ရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်၏ အမှားပင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။ ဘာသာရေးစာအုပ်တစ်အုပ်မှ ပြန်လည် ကောက်နှုတ် ဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 8:13 AM
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 8:09 AM
လူဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် Definition ပေးမလဲဟု မေးရင်း အောက်ပါ အကြောင်းအရာလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…..။
တစ်ခါမှာ . . . ကျမ်းစာသင်ကျောင်းက လူငယ်တစ်စုက နိုင်ငံအကြီးအကဲ တစ်ဦးထံသွားပြီးတော့ 'သမ္မာကျမ်းစာ' ဖတ်ကြားချီးမြင့်ပါလို့ ပန်ကြားကြတယ် ။ ဒီအခါမှာ . . . အကြီးအကဲက ကမ္ဘာဦးကျမ်း Genesis မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ထိုသို့ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဌာန် နှင့်အညီ လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ . . . ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ဖတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီလိုဖတ်ပေးတာကို လူငယ်တွေက တော်တော် မကျေမနပ် ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ ။ သိပ္ပံပညာနဲ့လည်း အံမ၀င်တဲ့ ၊ ခေတ်လည်းမမီတော့တဲ့ ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းက စာကြောင်းကိုမှ ဖတ်ကြားချီးမြင့်ရသလား၊ နေ့စဉ်ဘ၀ အတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့ စာကြောင်းတွေ ၊ လူအများရဲ့ ကိုယ်မှု နှုတ်မှုတွေမှာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့ သတိပေးတဲ့စာကြောင်း၊ စာပိုဒ်တွေအများကြီးပါလျက်နဲ့ ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းက အယူအဆဟောင်းကြီးကိုမှ ရွေးဖတ်ပေးပလေတယ် . . . စတဲ့ အပြစ်တင်တဲ့ အတွေးးတွေနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတာ ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံအကြီးအကဲ ဖတ်ပေးလိုက်တဲ့ စာကြောင်းက သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်၊ ဘုရားသခင်က လူကို ဖန်ဆင်းတယ် ။ ဘုရားသခင်က လူယောက်ျားနဲ့ လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းတယ်လို့သာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းက ဆိုတာ ဘုရားသခင်က ဂျူးကိုဖန်ဆင်းတယ် ၊ အာရပ်ကိုဖန်ဆင်းတယ် ၊ ဂျာမာန်ကိုဖန် ဆင်းတယ် ၊ ပြင်သစ်ကိုဖန်ဆင်းတယ် ၊ အင်္ဂလိပ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ မဖော်ပြဘူး ။
လူတွေဟာ လူတွေကို လူတွေအဖြစ်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ကြမယ်ဆိုရင် လူမှုပြသ၁နာတွေ တော်တော်နည်းခဲ့မှာပါ ။ လူတွေဟာ လူတွေကို လူတွေအဖြစ် မှန်မှန်မမြင်ခဲ့ကြဘူး ။ လူမျိုးစွဲတွေနဲ့ မြင်တယ် ၊ ဘာသာစွဲတွေနဲ့မြင်တယ် ၊ အသားအရာင် ၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားလိုမှုတွေနဲ့ လူတွေကိုကြည့်တယ် ၊ မြင်တယ် ။ အစွဲတွေပါလာတော့ အမှန်မမြင်တော့ဘူး ။ အမှန်မမြင်တော့ ပြသ၁နာတွေဖြစ်တယ် ၊ ပြသ၁နာတွေကနေပြီး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တယ် ။ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ရင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာ လူ့လောကမှာ မရနိုင်တော့ဘူး ။ ဒါတွေဟာ လူတွေက လူတွေကို မှန်မှန်မမြင်နိုင်ကြလို့ ဖြစ်ရတာ . . . ။ ဒါကြောင့် . . . ဘုရားသခင်သည် . . . လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဟာ အရေကြီးတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို အကြီးအကဲက ရှင်းပြတော့မှ လူငယ်တွေက ကျေနပ်သွားကြတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတာပဲ။
မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတော့ လူကို ခန္ဓာငါးပါး (ရုပ် ၊ ဝေဒနာ ၊ သညာ ၊ သင်္ခါရ ၊ ၀ိဥာဏ် ) ရှိသူ . . . ၊ မြင်မှု ၊ ကြားမှု အစရှိတဲ့ အတွင်းအပ အာယတန (၁၂)ပါးရှိတဲ့သူ ၊ ရုပ်သဘော ၊ နာမ်သဘော ၊ ရုပ်ဓာတ် ၊ နာမ်ဓာတ် တွေရှိတဲ့သူ အဖြစ်ပဲ မြင်ပြထားတယ် ။ ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုဘာသာမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်လိုအသားအရောင်ပဲရှိတဲ့လူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၊ အာယတန ရုပ်ဓာတ် နာမ်ဓာတ်တွေ စုဝေးနေတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တွေရှိနေတယ်လို့ မြင်တယ် ။ အဲဒီလို အစုဝေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူဟာ ကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ မြင်တယ် ။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ဒီခန္ဓာတွေ ၊ ဒီအာယတနတွေ၊ ဒီဓာတ်သဘောတွေရှိနေတဲ့အတွက် လူတွေဟာ လူတွေအချင်းချင်း ဘာမှ အထင်သေးစရာ လည်းမရှိဘူး ၊ မုန်းတီးစရာလည်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ် ။ ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ တွေရတဲ့ လူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမြင်ဟာ လူမျိုးစွဲ ၊ ဘာသာစွဲ ၊ အသွေးအရောင် စွဲတွေကင်းတဲ့ အမြင်ဖြစ်တယ် ။ ဒီအစွဲတွေကင်းလွတ်စွာနဲ့ လူတွေကိုကြည့်မြင် တတ်ရင် လူမှုပဋိပက္ခတွေ အများကြီး လျော့နည်းသွားမှာ . . . ။
Posted by ခေတ်သစ် at 2:48 PM
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 4:45 AM